Kuzvidzivirira muLinux Hongu kana kwete? | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Linux vs Windows, Resources
La kusimba kukuru kwefaira masisitimu (FS) ayo anoshandiswa muzvirongwa zveGNU / Linux akaita kuti vashandisi vawire mukukanganisa, vachifunga kuti hazvidi kuti ubvise hard disk sezvazvinoitika muWindows. Izvi hazvisi zvechokwadi zvachose, kunyangwe zvisiri zvakafanira uye zvakakosha seMicrosoft masystem, zvakanaka kuzviita.
Iwo masisitimu ZFS, EXT, JFS, XFS, ReiserFS, Btrfs, nezvimwe.Ivo vane njere dzekugovera masystem emafaira anodzivirira iwo unopinza uye unotyisa kupatsanuka kunoitika muWindows, asi izvo hazvireve kuti dambudziko haripo. Makore anogona kupfuura mushure mekumisikidzwa kwekuparadzirwa kwako uye kupatsanurwa kwaisazove dambudziko, kunyangwe kana iwe ukaishandisa zvakanyanya uye nekuisa uye kusunungura maraibhurari, nezvimwe.
Zvisinei, vamwe vashandisi vane yakaganhurirwa hard disk nzvimbo vanogona kunge vachizivikanwa zvakanyanya padambudziko rekuparadzaniswa. Yakatemerwa nzvimbo inoita kuti zvinyanye kuoma kune aya mafaera maseru kugovera nzvimbo kumafaira nyowani. Ndokusaka ini ndichikurudzira kuisa chishandiso chekubvisa yako hard drive. Kune akawanda, senge e4defrag (iyo yaungangodaro usingatombofaniri kuiisa nekuti yakatove yakaiswa nekumisikidza mukugovera kwako).
Kushandiswa kwaro kuri nyore kwazvo, iwe unongofanirwa kuvhura iyo terminal hwindo uye nyora zvinotevera:
Tsiva / nzira pamwe nechikamu kana chishandiso chaunoda kuzvidzikisira. Semuenzaniso: "sudo e4defrag -c / dev / sda1" kana inogona kunge iri dhairekodhi rimwe chete "sudo e4defrag -c / home". Asi chenjera, izvi zvinongokuudza iwe huwandu hwemafaira akawanikwa akapatsanurwa. Kana iyo nhamba iri pasi hauna chikonzero chekuzvidza, asi kana ichikwira pamusoro makumi matatu unofanirwa kufunga nezvekuzvidza. Kuzvidza zvese zvikamu:
Kana iwe uchingoda kukanganisa dhairekitori, unogona kushandisa semuenzaniso "/ imba" pachinzvimbo che "/ dev / sda *" kana kutodoma kugovera "/ dev / sda5". Kana iwe uine SSD, haufanirwe kunetseka kubva pane izvi, kupunzika kunongonzwisisika pane magineti akaomarara anotyaira ... SSDs inomhanya zvekuti haina kukosha uye zvakare, kuzvidzora kunongowedzera iwo kuverenga / kunyora kutenderera uye nekudaro kunoderedza hupenyu hunobatsira hwechairo chako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs Windows » Dzidziso: Defragment yako hard drive pasi peGNU Linux
Kutenda nekutichengeta isu tichiziva, ini ndaisaziva nezve e4defrag application.
Sekuziva kwangu, e4defrag ndeye chete ext4 mafaira masisitimu. Kwaziso
Ndizvozvo. Ini handina kuiisa, asi chishandiso chakasanganisirwa mupakeji e2fsprogs uye ndeye EXT4. Kune imwe FS (kunyangwe isiri yevose) kune zvimwewo zvinobatsira zveizvi. Semuenzaniso weBtrfs:
btrfs fileystem defragment "dhairekitori"
Ini ndaizo taura zvakafanana. Izvo zvakakosha kuti iwe uzvigadzirise, sezvo zvichitora sekureruka kuti isu tese tinoshandisa Ext4, uye nhasi, iri hurongwa kubviswa mumakomputa ane isingasviki makore mana anoitsigira pasina kukanganisa mashandiro ayo. BTRFS uye XFS zvakanaka, uye zvakakosha pakuchengeta mafirimu e4K.
Dany Rey akadaro
e4defrag - online defragmenter yeiyo ext4 faira sisitimu
e4defrag [-c] [-v] chinangwa…
e4defrag inoderedza kupatsanurwa kwehuremu hwakavakirwa faira. Iyo faira yakanangwa ne e4defrag inogadzirwa pane ext4
systemystem inogadzirwa ne "-O chiyero" sarudzo (ona mukadzi2fs (8)). Faira rakanangwa rinowana akawanda anovharira mabhuroko uye
inovandudza iyo faira yekumhanyisa mhanyisa.
target irinowanzo faira, dhairekitori, kana chishandiso chakakwidzwa senzvimbo ext4 yefaira. Kana tarisiro iri nzira
tory, e4defrag inoderedza kupatsanurwa kwemafaira ese ari mairi. Kana chinangwa chiri chishandiso, e4defrag inowana iyo mount point
yacho uye inoderedza kupatsanurwa kwemafaira ese munzvimbo ino yegomo.
-c Tora iyo yazvino yekuparadzaniswa kuverenga uye yakanaka yekuparadzanisa kuverenga, uye uverenge kupatsanurwa mamaki
zvichibva pavari. Nekuona iyi zvibodzwa, tinogona kuona kana tichifanira kuita e4defrag kunanga.
Kana ikashandiswa ne -v sarudzo, iyo yazvino yekuparadzaniswa kuverenga uye yakanaka yekuparadzanisa kuverenga iri
yakadhindwa kune yega faira.
Zvakare iyi sarudzo inoburitsa avhareji saizi yedata mune imwe nhanho. Kana iwe ukaiona, iwe unowana iyo faira ine
zvakakwanira kana kwete. Ziva kuti iyo saizi yekukura ndeye 131072KB mune ext4 faira system (kana saizi yekuvharira
Kana iyi sarudzo ikatsanangurwa, chinangwa hachina kumbobviswa.
-v Dhinda meseji yekukanganisa uye yekuparadzaniswa kuverenga pamberi uye mushure mekuzvidzivirira kwefaira rega rega.
Pindura Dany Rey
Claudio Segovia akadaro
Ndine urombo asi ini handizive kuti ndeipi faira system yangu Ubuntu 16.04 ine uye handizive kuti ndoiona sei.
Pane chero munhu ane zano kana iwe unogona kundibatsira?
Ndiko kuziva kana ndichigona kushandisa ino sisitimu kana imwe (kana kwete).
zviri nyore kushandisa pane ssd disks?
ALFREDO NAPOLEON NOBOA CARDENAS akadaro
Kwete Benito, mune iyo posvo inoratidza kuti haina musoro kuishandisa kune maSSD disks, nekuti inopfupisa hupenyu hwavo hunobatsira.
Pindura kuna ALFREDO NAPOLEON NOBOA CARDENAS
Chinhu chakafanana neichi chinokwanisika kuishandisa kubva… ubuntu kudzikisira iyo NTFS system nema windows? Ini ndinonzwisisa kuti Windows ine mafaera asingakwanise kufambiswa asi ko kana ichibvumidzwa isingaiti zvizere, ini ndatoedza nezvirongwa zvakasiyana asi vashoma vaita basa rakanaka asi risingakwanire kufambisa iwo mafaera ayo anodzivirira saizi zvehurongwa, ndezvekuti zvingave nyore kubvisa zvese uye kudzora musarudzo yangu asi pane software mumawindows yandisisina rezinesi
Chii chitsva muGuadalinex Edu 2013